ओलीको कदममा अड्किएको नेकपाको भविष्य ! « Sajilokhabar
ओलीको कदममा अड्किएको नेकपाको भविष्य !
अध्यादेश प्रकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद छरपष्ट भएको छ । सबै विषयको निरुपण गर्न स्थायी समिति बैठक राख्ने आवाज पार्टीमा उठेको छ । यसको प्रतिवादमा समस्यालाई टालटुल पारेर टार्ने मानसिकता निसृत छ । खासगरी पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक राख्न तयार देखिँदैनन् ।
आज सचिवालय बैठक हुँदैछ तर यसभन्दा अगाडि बढ्न उनले हिम्मत गरेका छैनन् । पार्टीका अरु सबै शीर्षस्थ नेताहरु दबाब दिएरै बैठक राख्ने पक्षमा छन् । यद्यपि बैठक राख्ने वा नराख्ने विषयमा यति ठूलो रस्साकस्सी किन ? यसका पछाडि रहेका थुप्रै विषय केलाउन जरुरी हुन्छ ।
के छ बैठकसम्बन्धी बैधानिक व्यवस्था ?
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५९ (क) १ मा स्थायी समितिको बैठक विशेष कारणबाहेक प्रत्येक ३ महिनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । गत पुसको शुरुमा पछिल्लो पटक स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भयो । यो बैठक विधान विपरित १ वर्षपछि भएको थियो । त्यस अवधीमा ४ वटा बैठक भइसक्नुपर्ने थियो ।
त्यसैले समयमा बैठक नहुने समस्या गम्भीरतापूर्वक उठाइयो । तगत्तै माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरुले व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि चैतको पहिलो हप्ताभित्र आव्हान गरिनुपर्ने स्थायी समितिको बैठकका लागि अहिले ‘फलामका चिउरा चपाउनु’ परेको छ ।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिका २० जना नेताहरुले बैठक राख्न लिखित माग गरिसकेका छन् । यसले बैठकका लागि ठूलो दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । पार्टी विधानको धारा ५९ (क) ४ माव्यवस्था भएबमोजिम कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ ।
बैठकका सम्भावित एजेण्डा
नेकपाले दुई वर्षबीचमा पार्टी एकतासम्बन्धी काम गर्न धेरै लामो समय लियो । एकताका काम मूल रुपमा सम्पन्न भए पनि जनवर्गीय संगठन र विभागको पूर्णता लगायत अझै धेरै काम बाँकी छन् । माघको बैठकले ती सबै काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । यस सम्बन्धमा बितेका ३ महिनामा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसबाहेक पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बैठकको पर्खाइमा छन् ।
५ वर्षका लागि निर्वाचित नेकपाको सरकारले आधा अवधी गुजारिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले केही राम्रा काम थालनी गरेको छ । थुप्रै काम हुन सकेका छैनन् । जे जस्तो भए पनि सरकारका कामको लेखाजोखा गर्नुपर्ने पार्टीको जिम्मेवारी हो । तर, अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक सरकारको कामको समीक्षा भएको छैन ।
सरकार र मुख्यतः प्रधानमन्त्री काम गर्ने दौरानमा थुप्रै विवादास्पद विषयमा जोडिएका छन् । तीमध्ये केही विषय पुराना भइसके । केही ताजा छन् । होली वाइनदेखि यति होल्डिङ्स हुँदै पछिल्लो ओम्नी अनियमिततासम्म काण्डैकाण्डका चाङ्ग लागेका छन् । यसमा नेकपाका थप्रै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुलाई प्रष्ट पार्ने जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कोर्ट्मा छ । सरकार यस्ता खेलमा लाग्न नहुने आवाज पार्टीमा बुलन्द हुँदैछ ।
पार्टीको निर्देशन र निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षमा नेकपा छ । त्यसको विपरित प्रधानमन्त्री सरकारका काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने बुझाइमा दृढ छन् । सरकारी तथा सम्वैधानिक नियुक्ति लगायत थुप्रै काम एकलौटी गरेका छन् । गर्ने सोच राखेका छन् । यसको परिणाम खासखास समयमा बाहिर छताछुल्ल हुन थालेको छ ।
विशेषगरीगत बैशाख ८ गतेको अध्यादेशको विषय तिनै श्रृंखलाको कडी हो । जुन उसै दिनको सचिवालय बैठकले रोक्नसम्म सकेन । त्यसैले स्थायी समितिमा छलफलको एउटा मुख्य विषय यही हुने निश्चित छ ।
माथिका एजेण्डा सचिवालय बैठकले हल गर्ने अवस्था अब नेकपामा छैन । त्यसैले स्थायी समितिको बैठकको आवश्यकता परेको बताएका छन्, माग गर्ने नेताहरुले । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती विषय फेस गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले भरसक उनी यसलाई पर धकेल्न चाहन्छन् ।
स्थायी समिति बैठक भयो र माथिका विषयमा ओलीको चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने त्यो उनका लागि प्रत्युपादक ठहरिन्छ । स्थायी समितिमा ओली भारी अल्पमतमा छन् । त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा जाँदा पनि उनलाई अनुकूलता छैन । त्यसैले उनी सबै विषय सामसुम पारेर मात्र बैठक बोलाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसका लागि उनले माधव नेपालसँग पावर सेयरिङ्गको प्रयासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । भलै उनको प्रस्ताव उधारोमा हुने गर्छ । पूर्व एमालेका एक थरी नेताहरुको माधव र केपीलाई मिलाउने प्रयत्न बिगत ३ महिना पुरानै हो ।
यसबेला उनीहरु पनि सकृय भएका छन् । तर, यसरी पार्टीका समस्या समाधान नहुने र ओलीलाई विश्वास गर्न नसकिने मत पनि माधव समुहमा प्रबल छ । नीति र विधिमा पार्टीलाई हिडाउनु मुख्य चुनौती हुने ठान्छन् उनीहरु । फेरी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर पुरै कित्ताकाट हुने अवस्था अब नेकपामा अन्त्य भएको छ ।
केपी ओलीको दोस्रो प्रयास स्थायी समिति बैठकअघि संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर देखाउने हो । त्यसका लागि कुन हदसम्म जालान् ? कुन सीमा नाघेर जान उनलाई नैतिकताले दिँदैन ? यसै भन्न सकिन्न । यति निश्चित छ कि नेकपाका दश बाह्र सांसदले क्याम्प परिवर्तन गरेर ओलीलाई सघाए भने उनलाई एकपटक राहत महसुस हुनेछ ।
नेकपाभित्र उठेका थुप्रै विषयको निर्धारण स्थायी समिति बैठकले गर्ने नै छ । खासगरी केपी ओलीको प्रस्तुतिमा परिणाम निर्भर हुने देखिन्छ । उनको दम्भ र अहंकार, गुटगत मानसिकता, पार्टीलाई बाइपास गर्ने कार्यशैलीमा शङ्का गर्ने ठाउँ बाँकी रहेमा नेताहरु उनलाई छुट दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।
माधव नेपालले उठाएको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग पुरा नगरेका ओलीलाई त्यसपछि भने पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । पाण्डवलाई पाँच गाउँ नदिँदा युद्धपछि कौरवले हस्तिनापुरको सिङ्गो राज्य गुमाएको महाभारतको कथा अरुभन्दा ओलीलाई नै बढि थाहा हुनुपर्छ ।
राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर, टनकपुर सन्धि खारेज गर ! महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा–आधा
रामजनम तिवारी, नेपाल सदभावना परिषद र पछि बनेको नेपाल सदभावना पार्टीका संस्थापक नेता मध्येका एक
भारतले चीनसँग युद्ध गर्न सन् १६६२ मा नेपालीभूमि कालापानीमा अर्धसैनिक बल स्थापना गरे पनि नेपाली
नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षले नयाँ मोड लिएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेमा नेकपा अध्यक्ष तथा